TOP 10 Abraham Lincoln xigashooyinka 2020 - xigasho Pedia
12 xigasho iyo odhaah
Abraham Lincoln wuxuu ahaa Madaxweynihii 16-aad ee Mareykanka. Marka lagu daro tan, wuxuu kaloo ahaa taliye dowle sidoo kale qareen ah.
Intii lagu jiray muddadii uu madaxweynaha ahaa, wuxuu Mareykanka ku hogaamiyay Dagaalkii Sokeeye ee Mareykanka oo loo maleynayo inuu yahay qalalaasaha ugu weyn ee siyaasadeed, dastuur iyo damiirnimo ee ummaddu weligeed la kulantay.
Sidoo kale, wuxuu baabi'iyey addoonsiga wuxuuna hagaajiyay dhaqaalihii dalka. Intii uu noolaa oo dhan isagu marwalba wuu saameyn jiray dad badan ku dhiirrigeliyey ereyadiisa iyo fikirradiisa.
Aynu eegno qaar Abraham Lincoln Quotes. Wuxuu yiri: "Hubso inaad cagahaaga saarto meesha saxda ah, ka dibna istaag" Tan macnaheedu waa inuu ku dhiirigelinayo dadka oo dhan inay ogaadaan waxa saxda ah oo ay hubiyaan waxa ay qabanayaan ka hor inta aysan ballan qaadin.
Mar alla markii aan doorano oo aan maskaxdeenna sameysanno, waxaa muhiim ah inaan dhulkeenna istaagno oo aan u sii jeedno ujeedkeenna. Haddii aan ka tanaasulno booskayaga, ma gaari doonno hadafkeenna waligeenna kama heli doonno wax macno nolosha ah.
Waxa kale oo uu yidhi, "Si tartiib ah ayaan u socdaa, laakiin marna gadaal uma socdo". Tan, wuxuu doonayaa inuu tilmaamo inay caadi tahay in si tartiib tartiib ah loo socdo laakiin waxaa muhiim ah in la fahmo in sida aan nolosha u dhex soconayno, aannan qabanayn wax dib noo dhigaya.
Waa inaan aragnaa in xitaa haddii dadaalkeenna uu yar yahay oo tartiib tartiib u socdo, waxaan raaceynaa waddo ina soo dhawaaneysa si aan u gaarno ujeedkeenna.
Mid kale oo aad u dhiirigelinta Abraham Lincoln Quote ayaa yidhi, "Sida ugu wanaagsan ee loo saadaalin karo mustaqbalkaaga ayaa ah in la abuuro". Taas macnaheedu waa in aad ku dadaasho sidii aad u abuuri lahayd mustaqbalka aad naftaada u rabto. Haku tiilayn dadka kale ama duruufaha kale si aad mustaqbalka ugu qaabeyso sida aad u rabto. Halkii aad u shaqayso si camalku u qaabeeyo mustaqbalkaaga.
Xigashooyinka cabsida leh Had iyo jeer dadka dunida ku nool ha u fiirsadaan Lincoln dhiirigelinta.
Hubso inaad cagahaaga dhigtid meesha saxda ah, ka dibna istaag. - Abraham Lincoln
Noloshu waxay nagu tuurtaa xaalado kala duwan. Qaarkood ayaa tijaabiya oo badanaaba way nagu adag tahay inaan…
Si tartiib ah ayaan u socdaa, laakiin marna gadaal uma socdo. - Abraham Lincoln
Waxaa la yidhi, "tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ' Haa, taasi waa gabi ahaanba run. Uma baahnid inaad ordo…
Had iyo jeer maskaxda ku hay in go'aankaaga gaarka ah ee aad ku guuleysato ay aad uga muhimsan tahay shay kasta. - Abraham Lincoln
Waxa ugu muhiimsan ee ay tahay inaad maskaxda ku hayso waa xallintaada. Waxay noqon laheyd kan ugu…
Waxba ha uga tegin berrito oo maanta la samayn karo. - Abraham Lincoln
Waa inaadan xajin waxkastoo sugaya berri. Qofna ma arkin waxa ay noqon laheyd berri. Sidaas darteed,…
Anshaxa ayaa dooranaya waxa aad hadda rabto iyo waxa aad inta badan rabto. - Abraham Lincoln
Uma lihi inaan guuleysto, waxaa igu waajib ah inaan run noqdo. Ma lihi inaan guuleysto, laakiin waxaa igu waajib ah inaan ku noolaado iftiinka aan haysto. - Abraham Lincoln
Noloshu waa xidhmooyin sheekooyin guul leh oo lagu daray dhowr xaaladood oo guuldaraystay. Waa caadi in mar kale lumo…